“Simfumene UMesiya”!​—Indlela UYesu Awasizalisekisa Ngayo Isiprofeto SeBhayibhile
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBicol IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiLuo IsiMalagasy IsiMaltese IsiMyanmar IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUruund IsiVietnam IsiWayuunaiki IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
Kwiminyaka emalunga namakhulu amane emva kokubhalwa kwencwadi yokugqibela yezibhalo zesiHebhere, isiprofeto sikaMika esingoMesiya sazaliseka: UYesu wazalwa eBhetelehem. Kwiminyaka emalunga neyi-30 emva koko, ngonyaka ka-29, kwazaliseka inxalenye yokuqala yesiprofeto sikaDaniyeli esingokuza kukaMesiya. UYesu wabhaptizwa waza uThixo wamthambisa ngomoya oyingcwele. Kanye ngexesha ekwakuprofetwe ngalo, uMesiya ekwakudala elindelwe, iMbewu, wafika!
Engalibazisanga, uYesu waqalisa ubulungiseleli bakhe, “evakalisa iindaba ezilungileyo zobukumkani bukaThixo.” (Luka 8:1) Kanye njengoko kwakuprofetiwe, uYesu wayenobubele, ebaphatha kakuhle yaye ebakhathalele ngokwenene abantu. Iimfundiso zakhe zazisebenziseka yaye zithandeka, wayephilisa abantu abanalo “lonke uhlobo lobulwelwe,” ebonisa ukuba uThixo wayenaye. (Mateyu 4:23) Abantu abaneminyaka eyahlukahlukeneyo bathontelana besiya kuYesu baza bathi: “Simfumene uMesiya”!—Yohane 1:41.
UYesu wachaza kwangaphambili ukuba kanye ngaphambi kokuba uBukumkani bakhe bulawule ngokupheleleyo, ehlabathini kwakuza kubakho iimfazwe, iinyikima zomhlaba nezinye iingxaki ezininzi. Wababongoza bonke ukuba ‘bahlale belindile.’—Marko 13:37.
UYesu wayeyindoda efezekileyo eyayingazange iyeke ukuthobela uThixo, sekunjalo wayeneentshaba ezambulalayo ekugqibeleni. Ngoko ukufa kwakhe kwaba yintlawulelo yokubuyisela oko kwalahlwa nguAdam noEva—ithemba lobomi obungenasiphelo eParadesi.
Ukufa kukaYesu kwazalisekisa isiprofeto, ngokunjalo nokuvuswa kwakhe njengesidalwa esinamandla somoya kwiintsuku ezintathu kamva. Emva kokuvuka kwakhe wabonakala kubafundi bakhe abangaphezu kwe-500. Ngaphambi kokuba anyukele ezulwini, waxelela abalandeli bakhe ukuba bashumayele iindaba ezilungileyo zoBukumkani bakhe ‘kubantu beentlanga zonke.’ (Mateyu 28:19) Bawenza ngokucokiseke kangakanani loo msebenzi?
—Lithatyathwe kuMateyu, kuMarko, kuLuka, kuYohane nakweyoku-1 kwabaseKorinte..